Maamulka gobolka Banaadir oo maanta kaliya aasay 165-ruux oo qaraxii shalay ku geeriyooday – Radio Daljir
Oktoobar 15, 2017 5:30 g 0
Maamulka gobolka Banaadir ayaa galabta u sameeyey aas balaaran 165-ruux oo ka mid ah dadkii ku geeriyooday qaraxii waynaa ee shalay kadhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaana isgooyska Zobe.
Dadka la aasay ayaa ahaa kuwa hilbahooda oo uu googo’ay oo aan la aqoonsan oo laga soo saaray meelihii uu qaraxa baabi’iyay, walina waxaa socda baadi goob loogu jiro dad wali la’yahay oo looga shakinsayhay burburka guryaha soo dumay inay ku hoos jiraan.
Dad badan ayaa wali baadi goob ugu jira ehaladooda oo nolol iyo geeri aan war loo hayn kuwaasi oo looga cabsi qabo inay ku geeriyoodeen qaraxyadii shalay kadhacay Muqdisho oo wali khasaarihiisa uu isa soo tarayo.
Wararka laga helayo saraakiisha caafimaadka ayaa sheegaya dhimashada ilaa iyo hadda inta la’ogyahay inay gaarayso laba boqol oo ruux, dhaawacana ilaa iyo shan boqol oo qof, walow khasaaruhuna uu intaasi ka badan karo.
Dadka geeriyooday ayaa waxaa ku jira afar wiil oo walaalo ah oo goob ganacsi ku lahaa goobta qaraxu kadhacay iyo gabar ardayad ahayd oo isu diyaarinaysay xafladeeda qalinjebinta ee jaamacada.
Waa qaraxii ugu xumaa ee kadhaca magaalada Muqdisho.
Nabadoon Yaasin Cabdisamad oo si Kulul uga Hadlay Qarixii Muqdisho, Canaantayna Madaxda Dowladda (dhegayso)